ရော်နယ်လ်ဒို နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူတိုင်းမသိကြသေးတဲ့ ငယ်ဘဝက အကြောင်းအရာများ - Shwe Khit Online TV
HomeEntertainmentရော်နယ်လ်ဒို နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူတိုင်းမသိကြသေးတဲ့ ငယ်ဘဝက အကြောင်းအရာများ
ရော်နယ်လ်ဒို နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူတိုင်းမသိကြသေးတဲ့ ငယ်ဘဝက အကြောင်းအရာများ
June 22, 2021 Yan Entertainment 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခါမှာ ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ကမ္ဘာကျော် ဘောလုံးကစားသမား တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ရော်နယ်လ်ဒို ရဲ့ ငယ်ဘ၀ အကြောင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရော်နယ်လ်ဒို ရဲ့ ငယ်ဘ၀ အကြောင်းအရာလေးတွေထဲက လူတိုင်းမသိလောက်သေးတဲ့ အကြောင်းတွေက ဘာတွေ ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်…. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ ရော်နယ်လ်ဒို နာမည်အရင်း
ဘောလုံးချစ် ပရိသတ်တွေ နဲ့ သူ့ရဲ့ Fan တော်တော်များများ က ခရစ်စတီယာ ရော်နယ်လ်ဒို လို့ပဲ သိကြတာပါ ။ တစ်ကယ်တော့ ရော်နယ်လ်ဒို ရဲ့ နာမည် အရှည်ကောက်က Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro လို့ အမည်ရပါတယ် ။ ဒီနာမည်ကို ပေးရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ ရော်နယ်လ်ဒို ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူဟာ သူသဘောကျခဲ့တဲ့ အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်သူ Ronald Regan ရဲ့ နာမည်ကို အစွဲပြုပြီး ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ …. shwekhitonlinetv.com
၂ ။ ရော်နယ်လ်ဒို မွေးနေ့နဲ့ မိသားစု ကိုယ်ရေး အကျဉ်း
ရော်နယ်လ်ဒို ရဲ့ မွေးနေ့ကတော့ ( ၁၉၈၅ ) ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၅ ) ရက်နေ့ဖြစ်ပြီး မွေးချင်း မောင်နှမ ( ၄ ) ယောက်ထဲ မှာ အငယ်ဆုံးသားလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဖခင် နာမည်ကတော့ Jose ဖြစ်ပြီး ဥယျာဉ်မှုး တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ဘောလုံးသမား အဖြစ်လည်း ကစားခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် ။ မိခင်ဖြစ်သူ Maria ကတော့ မိသားစုအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ဝင်ငွေ ရှာနိုင်ဖို့ အတွက် အိမ်အကူ ၊ ထမင်းချက် အလုပ်ကို ညမနက်ခင်အထိ လုပ်ကိုင်ခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ ရော်နယ်လ်ဒို ရဲ့ အမည်ပြောင်
ရော်နယ်လ်ဒို တစ်ယောက် အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အခါ ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ သူ့ကို ခေါ်ကြတဲ့ အမည်ပြောင်တွေကတော့ “cry baby” နဲ့ “Little Bee” လို့ ခေါ်ကြပါတယ်တဲ့ ။ Cry Baby လို့ ခေါ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းက ရော်နယ်လ်ဒို ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက သူဖြစ်ချင်တဲ့ ပုံစံအတိုင်း ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင် မကြာခဏ ငိုတတ်လေ့ ရှိလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ တစ်ခြားသော ကလေးတွေက ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ မပြေလည်ရင် အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်လေ့ရှိပေမယ့် ရော်နယ်လ်ဒို တစ်ယောက်ကတော့ အသင်းဖော်တွေနဲ့ သဘောထားကွဲလွဲတဲ့အခါတိုင်း မကြာခဏဆိုသလို ငိုလေ့ရှိပါတယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
နောက်ထပ် နာမည်ပြောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Little Bee” လို့ ခေါ်ရတဲ့ အကြောင်းကတော့ ကွင်းထဲမှာ ဘောလုံးကစားတဲ့ အခါတိုင်း ပျားတစ်ကောင်လို လျှင်မြန်စွာ လှုပ်ရှားနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘောလုံးက သူ့ခြေထဲရှိနေတဲ့ အချိန်မှာတော့ အရှိန်ကို အနည်းငယ် လျော့ချပြီး Skill သုံးကာ ပြိုင်ဘက်အသင်းကို ထိုးဖောက်တတ်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်သွားပါတော့တယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ ရော်နယ်လ်ဒို ရဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်း
ရော်နယ်လ်ဒို က သူအခုလို အောင်မြင်လာရတဲ့ အကြောင်းအရင်း နောက်ကွယ် တွေထဲမှာ ငယ်သူချင်းဖြစ်သူ Albert Fantrau နဲ့လည်း သက်ဆိုင်တယ်လို့ ပြောကြားဖူးပါတယ် ။ အကြောင်းကတော့ ရော်နယ်လ်ဒို ငယ်စဉ်တုန်းက ဘောလုံးအကယ်ဒမီ တစ်ခုဟာ သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ Albert Fantaru ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း Albert က ငြင်းပယ်ခဲ့တာကြောင့် ရော်နယ်လ်ဒို ကိုပဲ အကယ်ဒမီက ရွေးချယ်လိုက်ပါတော့တယ် ။ ဒီအချိန်မှာ ရော်နယ်လ်ဒိုက “ မင်းဘာကြောင့် ငြင်းလိုက်တာလဲလို့ ” မေးလိုက်ချိန်မှာတော့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ Albert ကဖြေခဲ့တာကတော့ “ မင်းက ငါ့ထက် ပိုကောင်းပါတယ် ” လို့သာ ရိုးရိုးလေး ဖြေခဲ့ပါတယ်တဲ့…. shwekhitonlinetv.com
၅ ။ ငယ်စဉ်ကတည်းက Ferrari ကားဝယ်ဖို့ စိတ်ကူးခဲ့တဲ့ ရော်နယ်လ်ဒို
ရော်နယ်လ်ဒို တစ်ယောက် Sporting အကယ်ဒမီမှာ တက်ရောက်နေစဉ် တစ်နေ့မှာတော့ အပြစ်ပေးခံရပြီး အပြစ်ဒဏ်ကတော့ အမှိုက်ပုံး သယ်ပြီး အမှိုက် ပစ်ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကို သူ့ရဲ့ အသင်းဖော်တွေ မြင်ပြီး ရော်နယ်လ်ဒိုကို လှောင်ပြောင် ရယ်မောချိန်မှာတော့ ရော်နယ်လ်ဒိုက “ တစ်နေ့ကျရင် ငါ က ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမား ဖြစ်လာမှာ ပြီးရင် Ferrari ကားတွေ အများကြီးလည်း ဝယ်ပစ်မှာ ” လို့ အသင်းဖော်တွေကို အော်ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
၆ ။ ငယ်စဉ်က နှလုံးရောဂါရှိခဲ့တဲ့ ရော်နယ်လ်ဒို
ရော်နယ်လ်ဒို ရဲ့ ငယ်ဘ၀ ဟာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှု မျိုးစုံကို တွေ့ကြုံ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတာကြောင့် ကလေးငယ်တစ်ယောက် အနေနဲ့ စိတ်ဝေဒနာ ရသွားပြီး နှလုံးရောဂါ ကို ခံစားခဲ့ရပါတယ် ။ ဒီ နှလုံးရောဂါကြောင့်ပဲ ရော်နယ်လ်ဒို ဟာ သူ့ရဲ့ ဘောလုံးကစားသမား ဘ၀ကို စွန့်လွှတ်ခံရခါနီးအထိ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကံကောင်းစွာနဲ့ Sporting အသင်းမှာ ရှိတဲ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့တွေက ရော်နယ်လ်ဒို ရဲ့ နှလုံးကို ခွံစိတ်ကုသပေးဖို့ အတွက် သူ့ရဲ့ မိဘတွေဆီကနေ ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံခဲ့ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
ခွဲစိတ်ခဲ့ပုံတော့ ဆရာဝန်တွေဟာ ရော်နယ်လ်ဒို နှလုံးအတွင်းက သွေးလမ်းကြောင်းတွေကို လေဆာ အသုံးပြုပြပြီး တိုးမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ် ။ ဒီလို လုပ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် သူ့ရဲ့ နှလုံး အတွင်းမှာရှိတဲ့ သွေးလည်ပတ်မှု စနစ်ဟာ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်ကောင်းလာပါတော့တယ် ။ ဆရာဝန်တွေရဲ့ ကြိုးစားပမ်းစား ကုသပေးခဲ့မှုတွေကြောင့် ရော်နယ်လ်ဒို ယနေ့အချိန်မှာတော့ မြက်ခင်းစိမ်းတွေပေါ်မှာ အောင်မြင်မှုတွေကို ရယူနိုင်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးခဲ့တာကတော့ ရော်နယ်လ်ဒို နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူတိုင်းမသိကြသေးတဲ့ ငယ်ဘဝက အကြောင်းအရာလေး တစ်ချို့ကို စုစည်းဖော်ပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ဖော်ပြပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှု ပေးကြပါဦးနော်…. shwekhitonlinetv.com
မျက်လှည့်ပြရင်း အသက် အန္တရာယ်ဖြစ်ပွား ခဲ့တဲ့ မျက်လှည့်ဆရာတွေရဲ့ အဖြစ်အပျက်များ
ဆင်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူတွေ သိပ်မသိကြသေးတဲ့ ထူးထူးခြားခြား အကြောင်းအရာများ
သစ်ပင်တစ်ပင်တည်းကို ထွင်းထုထားတဲ့ အံ့ဖွယ် ပန်းပုလက်ရာများ